Ifama eneentaba ezikufutshane neBolzano - I-Airbnb
Ifama eneentaba ezikufutshane neBolzano
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguRoman
I-32 m² monolocal kumgangatho ophantsi inebhedi enkulu e-1 enkulu, ikhitshi elinezixhobo zekhitshi ezipheleleyo, indawo yokutyela enomabonakude, isathelayithi, unomathotholo kunye neWiFi, igumbi lokuhlambela elikhulu eli-1 elineshawa yokuhamba, indawo engaphandle ngqo emaphandleni enetafile yokutyela kunye netafile yokutyela. imbonakalo engabonakaliyo yeeDolomites. Ifulethi lixhotyiswe ngeetawuli, kunye nebhedi kunye nelinen yetafile. Ixhotyiswe ngepayina yamatye amaninzi aqinileyo, le ndlu idibanisa imibono yale mihla yokuhlala kunye nempahla yemveli.
"UKUZIBONA KANYE KUNGCONO KUNOKUVA OKUKHULU KWABANYE" Ukuzola okumangalisayo phakathi kwamadlelo kunye nehlathi, kunye nombono ocacileyo weDolomites ekhethekileyo. Jonga emagxeni omfama okanye ude uncedise ngokukhathalela izilwanyana zethu ezininzi ezikhulu nezincinci efama. I-Unterpfaffstall Hof, indawo yeholide egqibeleleyo yezibini ezifuna uxolo nokuzola, abantu abadala abathanda ukukhwela intaba kunye neentsapho ezinabantwana.
Sikufutshane kakhulu neRittner Horn skiing kunye nommandla wokunyuka intaba, kwaye iindlela ezahlukeneyo zokukhwela intaba ziqala kwifama yethu. Iiphiramidi zomhlaba, umzila kaloliwe omxinwa, amachibi okuqubha nokunye okuninzi kunokufikelelwa kwiikhilomitha ezimbalwa. Kukho iindawo zokutyela ezi-2 kubumelwane bethu kumgama wokuhamba (2 imiz)
Thina, abalimi, siyafumaneka kwiindwendwe zethu yonke imihla ngemibuzo, siyakuvuyela ukubakhokela kwifama yethu okanye sikunike iingcebiso malunga neendawo zokundwendwela kunye nokuhamba.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Renon